Blackview A9 Pro, igwefoto ntinye abuo | Gam akporosis
Nwa oji chọrọ ọgụ mbanye-ajụ nso na ya ọhụrụ ekwentị, na Blackview A9 Pro, ngwaọrụ nwere ngwaike nke akụrụngwa mana nke ahụ pụtara maka sistemụ igwefoto ya abụọ dị na azụ nke ngwaọrụ ahụ ga-enye gị ohere iji foto bokeh were ma ọ bụ na-elekwasị anya.
Ekwentị nwekwara ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na nke ahụ ga-akụ ahịa n'oge nke abụọ nke afọ a na ọnụahịa ahụ ọ gaghị agafe euro 120.
1 Blackview A9 Pro imewe
Blackview A9 Pro imewe
Banyere imewe, anyị na-ahụ ekwentị dị mfe, yana ahịrị n'ozuzu ya na nke ahụ anaghị apụta ìhè ma e jiri ya tụnyere ndị na-asọmpi ya. Ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ ihe ịtụnanya. Maka ndị na-ebido ebido, n’azụ Blackview A9 Pro, nke bụ nke polycarbonate, Ọ bụ ebe onye nrụpụta etinyela igwefoto ya abụọ n'akụkụ ọkụ ọkụ.
Ma n'aka nke ọzọ anyị nwere akụkụ ihu, ebe anyị na-ahụ ab- Home windo nke na-arụkwa ọrụ dịka ihe mmetụta mkpịsị aka, nkọwa zuru ezu ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na anyị na-ekwu maka ntinye - usoro dị iche.
Blackview A9 na-akwado ihuenyo nke a 5.0 nke anụ ọhịa IPSs arụpụtara site AUO na na o nweta HD mkpebi na iko 2.5 D. N'okpuru hundu anyị na-ahụ a processor MediaTek MT6737 yanan 2 GB nke Ram na 16 GB nke nchekwa dị n'ime na anyị nwere ike ịgbasa site na oghere kaadi micro SD ya.
Igwefoto azụ nwere a 4 megapixel Samsung 8H8 oghere yana igwefoto VGA nke abụọ bụ maka ị nweta omimi nke ihe oyiyi. Anyị enweghị ike ichefu igwefoto ya 2 megapixel na, na-enweghị nnukwu ọfụma, ga-eme ka ị pụọ n'ihe karịrị otu nsogbu.
Kwuo na Blackview A9 Pro nwere a 3.000 mAh batrị, karịa iji kwado oke nke ngwaike ngwaọrụ, yana ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, Android 7.0 Nougat na njikọta 4G LTE.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Blackview A9 Pro, igwefoto igwefoto ntinye abụọ
Hangouts maka gam akporo ga-agbapụ ọrụ SMS na May 22